မန်နေဂျာ၊ ဓာတ်ပုံနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » မန်နေဂျာဓါတ်ပုံပညာနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Manager ကို, ဓါတ်ပုံပညာနှင့်မာလ်တီမီဒီယာ
ရာထူး: မန်နေဂျာဓါတ်ပုံပညာနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ
အဆိုပါမန်နေဂျာဓါတ်ပုံပညာနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ , စီမံခန့်ခွဲအစီအစဉ်များအပေါင်းတို့နှင့်ဓာတ်ပုံညွှန်ကြားနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ လိုအပ်အဖြစ်တက္ကသိုလ်တိုးနှင့် University ဆက်ဆံရေးနှင့်သူတစ်ပါး၏တပ်မသည်။ ဒီအနေအထားမျိုးစုံဌာနများတက္ကသိုလ်ကိုဖြတ်ပြီးန်ထမ်းများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများကူညီနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
အမျိုးမျိုးသောရုံးများနှင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းအတွက်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် directing, တက္ကသိုလ်ဓာတ်ပုံဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်
အယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြောင်းအရာအပါအဝင် applications များအမျိုးမျိုးအဘို့ဓာတ်ပုံ, အ UHD မဂ္ဂဇင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားစျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအပေါင်ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်
တက္ကသိုလ်တိုးနှင့် University ဆက်ဆံရေး၏ဌာနခွဲနှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးများအတွက်အထူးဖြစ်ရပ်များဓါတ်ပုံများရိုက်
တက္ကသိုလ်ဆက်ဆံရေးဗီဒီယိုတစ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် မာလ်တီမီဒီယာ အခွက်တဆယ်, တည်နေရာ, ကျားကန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းစီမံကိန်းများ,
အစီအစဉ်များ, အကဲဖြတ်ခြင်း, ဓာတ်ပုံပညာ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များအကြံပြုနှင့် မာလ်တီမီဒီယာ
လုပ်ငန်းခွင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့: မှန်မှန် (s) ကိုလက်အောက်ခံမှအလုပ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့
ကြီးကြပ်မှုအား: ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်အပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေသည်; အသစ်ကန်ထမ်းများငှားရမ်း; စည်းကမ်းလုပ်ရပ်များ; အချိန်ဇယားဆွဲဝန်ထမ်းအလုပ်ချိန်အပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေသည်; နည်းပြများနှင့်အကြံပေးခြင်းအပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေသည်; လေ့ကျင့်ရေး; ဝန်ထမ်းမကျေလည်မှုများနှင့်တိုင်ကြားမှုများကိုင်တွယ်အပေါ်အကြံပြုချက်များကိုထောက်ပံ့ပေး; နဲ့ off အချိန်ပေးအပ်အပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်စေသည်
အသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှု, နဲ့စှမျး
Adobe က Creative Cloud သို့မဟုတ် CS6, Photoshop ကို, ဓာတ်ပုံစက်ပြင်, အလင်းအခန်းနှင့်ဆက်စပ်ဖန်တီးမှုပလီကေးရှင်းတတ်ကျွမ်း
ကင်မရာများနှင့်ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်, ရှပ်တာအမြန်နှုန်း, aperture, မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားများ, filter များနှင့်သက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့်နားလည်မှု; ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၏နားလည်မှု, ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်မီးအခြေခံမူ၏နားလည်မှု
မူလတန်းလုပ်ငန်းတည်နေရာ: ရာထူးနှစ်ခုလုံးအိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်အလုပ်လုပ်တယ်, အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရသောအခါပါဝင်ပတ်သက်ပူသို့မဟုတ်အအေးရာသီဥတုရှိပေမည်။
ရာထူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖြစ်၏ တစ်ဦးချင်းစီရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် 50 ပေါင်အထိသယ်ဆောင်ရမည်စသည်တို့ကို, (25%) ထိုင်လျက် (25%) လမ်းလျှောက်, (60%) ရပ်နေသည်ကိုအကြောင်းကိုသမ္မာသတိရှိပါတယ်။ တွန်းများနှင့် 100 ပေါင်အထိဆွဲထုတ်ဖြစ်ရမည်။ ရံဖန်ရံခါ stooping ဒူးထောက်, သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ဝပျ။ ကိုတက်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ရမည်။ မြင်နိုင်ဖြစ်ရမည်, အရောင်ရူပါရုံကိုလိုအပ်ပါသည်
EEO / AA ကို
ဓာတ်ပုံများတွင်အတွေ့အကြုံခြောက် (6) နှစ်၏နိမ့်ဆုံး
အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အလုပ်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးကို (2) နှစ်
အထူးဖြစ်ရပ်များမှာအတှေ့အကွုံပစ်ခတ်မှုဓာတ်ပုံနှစ်မျိုးနှစ် (2) နှစ်
လိုင်စင် / အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်: အဘယ်သူမျှမ
မြို့သူမြို့သားနှလုံး, တက္ကသိုလ် သာ. ကွီးမွတျဟူစတန်၏မတူကွဲပြားမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်
Metropolitan Area ကိုနှင့်၎င်း၏ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များမှတဆင့်, အနှင့်အတူထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါက
ဒေသ။ UHD သင်ကြားမှုကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံထားတဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါသည်,
ဝန်ဆောင်မှု, ကျောင်းကသုတေသနကျောင်းသားများက '' အခွက်ဖွံ့ဖြိုးသူတို့ကိုပြင်ဆင်ထားရန်
တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအောင်မြင်မှုသည်။ UHD ဟာတလျှောက်လုံးကနေကျောင်းသားများကိုဆွဲယူ
သာ. ကွီးမွတျဟူစတန်ဧရိယာ။ UHD အများဆုံးလူမျိုးစုကွဲပြားခြားနား၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်
အရည်အသွေးအမြင့်မားတဲ့ပညာရေးအဖြစ်သေးငယ်တဲ့အတန်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းကို လိုက်. ။
UHD 1,100 ဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများကျော်လုပ်ကိုင်။
ယင်း၏ UHD မစ်ရှင်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စိုက်ပျိုးထားပါတယ် 1974 အတွက်တံခါးများ, နှင့်ယခုကမ်းလှမ်းမှု
44 ဒေသများနှင့်ရှစ်မာစတာဘွဲ့အစီအစဉ်များအတွက် baccalaureate ဒီဂရီ။ 14,000 ကျော်
ကျောင်းသားများကိုငါးခုကောလိပ်များအတွက်အတန်းတက်ရောက်ရန်: စီးပွားရေး, Humanities နှင့်လူမှု
UHD မှလာမယ့်ကျောင်းသားအားလုံးများအတွက် entry ကိုအမှတ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောကောလိပ်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2,000 ကျောင်းသားများကိုလူမှုရေးအတွက်ဒီဂရီနှင့်အတူနှစ်စဉ်ဘွဲ့ရများနှင့်
အနုပညာ, လူမှုရေးသိပ္ပံ, စီးပွားရေး, ထိုသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ, ပညာရေးနှင့်
ဟူစတန်စနစ်၏တက္ကသိုလ်, UHD ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်
ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ, full- အလုပ်လုပ်သောကျောင်းသားများသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း-အချိန်,
UHD-The ဟူစတန်တက္ကသိုလ် uh-Clear ကိုရေကန်အပြင်တခြားတက္ကသိုလ်တွေ
ကောင်းစွာနှစ်ခုသင်ကြားရေး centers- အဖြစ်
သကြားမြေယာမှာ uh စနစ်
ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, လျှောက်လွှာများဖုံးပေးစာ / ပေးစာ
က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-07-31
ယခင်: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဗီဒီယို Editor ကို
နောက်တစ်ခု: Web Design နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ International